LEGO Model Designer သည် professional builders များအတွက်အဓိကကျွမ်းကျင်မှုများကိုဝေမျှသည်
LEGO Model Designer သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်ဆောက်သူများအတွက်အဓိကကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖော်ပြသည်
03 / 08 / 2021 04 / 08 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 222 Views စာ0မှတ်ချက် Florida, Lego, LEGO Group, Lego မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာ, LEGO Model ဆိုင်, LEGO.com, Merlin ဖျော်ဖြေရေး, အဆိုပါ LEGO Group
A Lego Model Designer တစ်ယောက်က Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ် Lego လက်သမား။
တစ်ဦးအတွက် အင်တာဗျူး Merlin Entertainments with LinkedIn, Brenden Atkinson,aLego မော်ဒယ်ဒီဇိုင်းနာ Lego ဖလော်ရီဒါရှိ Model Shop သည်သူ၏အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့အပြင်သူတို့၏အုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ငွေရမည့်အိပ်မက်အတွက်မည်သူမဆိုအတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုပေးသည်။
Model Builder တစ်ယောက်၊ ပြီးတော့ Model Designer တစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာအခုဆိုခြောက်နှစ်ရှိပြီ၊ Atkinson က Professional တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသိတယ်။ Lego ကျွမ်းကျင်သူ။
"မင်းကပဟေိတွေကျွမ်းကျင်လား။ မင်းမှာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မျက်လုံးရှိနေတာဖြစ်နိုင်လား။ ဒါဆိုဒါကမင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်! " မင်းအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဘာအရည်အချင်းတွေလိုအပ်လဲလို့မေးတဲ့အခါ Atkinson ကပြောတယ်။ "အခြားကျွမ်းကျင်မှုအစုံသည်အဖွဲ့အစည်း၊ အခြားသူများနှင့်ကောင်းစွာကစားခြင်းနှင့် Excel Skills ကဲ့သို့ကစားပုံကောင်းများပေါ်ထွက်လာသော်လည်း"
သို့သော်အခန်းကဏ္ကို ၀ င်ရန်စဉ်းစားသူတိုင်းတွင်အားနည်းချက်အချို့ကိုသတိပြုသင့်သည်။ Atkinson ကဝန်ခံဖို့လိုသေးသည်။
“ ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အလုပ်အတွက်၊ ကြောက်စရာစာရွက်စာတမ်းတွေအမြဲရှိတယ်” သူဝန်ခံတယ်။ “ အပျော်ကစားတာထက်ပိုခက်ခဲတာကဘာလဲ Lego အုတ်တွေကိုရပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေလုပ်ရမလား! "
အဲဒါကမင်းကိုမပစ်ထားဘူးဆိုရင်အလုပ်တွေရှိတယ် LegoUSA ရှိ Florida ရှိ Merlin ဖျော်ဖြေမှုတစ်လျှောက်၊ မလေးရှားရှိ Johor နှင့် UK ရှိ Windsor အပါအ ၀ င်ဆက်စပ်နေသောအခန်းကဏ္များ Lego မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာ, LEGO Model Builder, အကြီးတန်း Lego မော်ဒယ်ဒီဇိုင်းနာ၊ နည်းပညာဒီဇိုင်နာနှင့် Brickstock တွဲဘက် ဘယ်သူသိလဲ၊ မင်းရဲ့အိမ်မက်အခန်းကဏ္ကအနီးဆုံးမှာရှိနေနိုင်တယ်။
← Lego Creator 3-in-1 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လွမ်းဆွတ်ခြင်း၏ခေတ်သစ်အပိုင်းအစ
LEGO MASTERS 'Sam သည် Star Trek ဖန်တီးသူအားဂါရဝပြုသည် →